Ọrụ Eserese foto Ere na mgbazinye na Realtyww Info
Ọrụ Eserese foto n'ime Florida
Ọrụ Eserese foto n'ime New York City
Ọrụ Eserese foto n'ime New York
nlele Ọrụ Eserese foto Bipụtara 10 months ago
Ebiputara site na jenny davis
nlele Ọrụ Eserese foto Bipụtara 2 years ago
Foto bụ teknụzụ, sayensị, ngwa na omume nke imepụta onyogho na-adigide site na ịdekọ ọkụ ma ọ bụ radieshọn ọzọ, ma ọ bụ elektrọniki site na ihe nhụta onyonyo, ma ọ bụ site na ihe nwere ọkụ ọkụ dị ka ihe nkiri onyonyo.  A na-ejikarị lens na-elekwasị ọkụ nke gosipụtara ma ọ bụ na-esite n’ihe dị ka ezigbo onyoonyo n’elu mbara igwe nwere oge a na-ekpughe ya. Site na ihe onyonyo elektrọniki, nke a na - arụpụta ụgwọ eletriki n'otu pikselụ ọ bụla, nke a na - ahazi ya ma na - echekwa ya na faịlụ dijitalụ maka ngosipụta ma ọ bụ nhazi na - esote. Nsonaazụ site na emulsion foto bụ ihe na-adịghị ahụ anya nke na-emegharị anya, nke na-emezi "n'ọzụ" ka emechara bụrụ ihe a na-ahụ anya, ma ọ bụ nke na-adịghị mma ma ọ bụ nke dị mma dabere na ebumnuche nke ihe osise foto na usoro nhazi. A na-ejikarị ihe onyonyo na-adịghị mma mee ihe nkiri iji mepụta onyogho dị mma na mpempe akwụkwọ, amaara dị ka mbipụta, ma ọ bụ site na iji enlarger ma ọ bụ site na ibipụta kọntaktị. A na-eji foto eme ihe n'ọtụtụ mmụta sayensị, n'ichepụta ihe (dịka, photolithography), na azụmaahịa, yana ojiji ndị ọzọ maka nka, ihe nkiri na ihe nkiri vidio, ebumnuche ntụrụndụ, ntụrụndụ, na nkwukọrịta.